Sony မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
10 / 09 / 2021 11 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 170 Views စာ0မှတ်ချက် 5002123: Dartဇ Revan, Aspyr, Bioware, အုတ်ခဲ, Dartဇ Revan, Disney+, ဟောငျးသမ္မတနိုင်ငံ Knights, Lego, Lego Star Wars, Lego စတိုးဆိုင်များ, LEGO.com, Patty Jenkins, PlayStation, Play Station က 5, Rian ဂျွန်ဆင်, Rogue တပ်မှ, Sony က, Star Wars, Star Wars: စစ်မျက်နှာ, Star Wars: စစ်မြေပြင် II, Star Wars: ဟောငျးသမ္မတနိုင်ငံ၏ Knights, Star Warsဖြေ, Star Wars: အဆိုပါ Clone စစ်ပွဲများ, Star Warsဖြေ, Star Wars: ရှေးသမ္မတနိုင်ငံ, The Bad အသုတ်လိုက်, အဆိုပါ Clone Wars, အဆိုပါ LEGO Group, အဆိုပါ Mandalorian, အဆိုပါဟောငျးသမ္မတနိုင်ငံ, ဗွီဒီယိုဂိမ်း, ဗီဒီယိုဂိမ်းများ
24 / 08 / 2021 25 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 203 Views စာ0မှတ်ချက် 76184 Spider-Man Mysterio's Drone Attack vs., 76185 Spider-Man အဆိုပါ Sanctum အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ, 76195 Spider-Man's Drone Duel, အဲဖရက် Molina, ဆရာဝန် Octopus, အစိမ်းရောင် Goblin, Lego, Lego မှ marvel, Lego Spider-Man, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, ရှေဖရုံသီး, ရွှေဖရုံသီးဗုံး, Sony က, Spider-Man, Spider-Manဖြေ - အိမ်မှာမရှိဘူး, နောကျတှဲရထား
Lego Marvel Venom ကနောက်ကျနေတဲ့အတွက်အစုံကိုစင်ပေါ်မှာစောင့်နေတယ်
14 / 08 / 2021 14 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 221 Views စာ0မှတ်ချက် 76162 အနက်ရောင်မုဆိုးမရဲ့ရဟတ်ယာဉ် Chase, 76187 အဆိပ်, 76199 သတ်ဖြတ်ခြင်း, Black ကမုဆိုးမ, ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခြင်း, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်, နှောငျ့နှေး, နှောင့်နှေး, သံခမောက်, ခမောက်စုဆောင်းခြင်း, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, တုပ်ကွေးရောဂါ, Sony က, Taskmaster, အဆိပ်, အဆိပ် 2, အဆိပ်: သုတ်သင်မှုရှိပါစေ
Venom ၏နောက်ဆက်တွဲဖြန့်ချိမှုသည်သက်ဆိုင်ရာ LEGO အနေနှင့်တစ်ဖန်ပြန်လည်တွန်းပို့ခဲ့သည် Marvel အစုံများဆက်လက်
ဤအလုပ်လုပ်သော LEGO PlayStation သည်အုတ် -based ဂိမ်းကိုနောက်အဆင့်သို့ရောက်သည်
09 / 05 / 2021 09 / 05 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 355 Views စာ0မှတ်ချက် အားကစားပြိုင်ပွဲ, ဂိမ်း, Lego, Lego ဂိမ်း, Lego Spider-Man, Lego ဗီဒီယိုဂိမ်းများ, PlayStation, Sony က, Spider-Man, TikTok, UK, ဗွီဒီယိုဂိမ်း, ဗီဒီယိုဂိမ်းများ, ဗွီဒီယိုဂိမ်း, ဗီဒီယိုကိုဂိမ်းများ
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှဆောက်လုပ်သူတစ် ဦး က 71374 Nintendo Entertainment System သည်အတော်အတန်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုမရှိကြောင်းနှင့်ရှာဖွေရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်
LEGO အကြောင်းပိုမိုသောသတင်းများ Star Warsဖြေ - Skywalker Saga မကြာခင်ရောက်လာတော့မှာပါ
07 / 04 / 2021 07 / 04 / 2021 ခရစ် Wharfe 1068 Views စာ0မှတ်ချက် ကို Activision, E3, Lego, Lego Star Wars, Lego Star Wars: Skywalker Saga, Nintendo, Sony က, Star Wars, TT အားကစားပြိုင်ပွဲ, ဗွီဒီယိုဂိမ်း, ဗီဒီယိုဂိမ်းများ, Warner Bros., Xbox
Lego နေစဉ် Star Warsဖြေ။ ။ Skywalker Saga ကအကန့်အသတ်မရှိပဲပုံရိပ်နှောင့်နှေးနေတယ်၊ ​​ငါတို့တွေသိပ်ကြာကြာစောင့်စရာမလိုဘူး
နောက်ထပ် Lego Marvel set ကိုယခုလအတွင်းက၎င်း၏လည်စည်း -in ကိုရုပ်ရှင်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်
18 / 03 / 2021 18 / 03 / 2021 ခရစ် Wharfe 889 Views စာ0မှတ်ချက် 76162 အနက်ရောင်မုဆိုးမရဲ့ရဟတ်ယာဉ် Chase, 76199 သတ်ဖြတ်ခြင်း, မြန် & Furious, Lego, Lego မှ marvel, LEGO.com, Marvel, Sony က, အဆိုပါ LEGO Group, အဆိပ်, အဆိပ်: သုတ်သင်မှုရှိပါစေ
Venom: Let There Be Carnage သည် LEGO ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသောဇွန်လထုတ်ပြန်မည့် နေ့မှစ၍ နှောင့်နှေးခဲ့သည် Marvel 76199 သုတ်သင်မှုအလိုတော်
Lego ကိုငါတို့မြင်ရမလား Star Wars: အနာဂတ်အားကစားပွဲတွင် Skywalker Saga?
05 / 03 / 2021 05 / 03 / 2021 ခရစ် Wharfe 1642 Views စာ0မှတ်ချက် GamesRadar, Lego, Lego Star Wars, Lego Star Wars: Skywalker Saga, Microsoft က, Nintendo, PlayStation, Sony က, Star Wars, TT အားကစားပြိုင်ပွဲ, Warner Bros., Xbox, YouTube ကို
GamesRadar ၏အနာဂတ်ဂိမ်းပြပွဲသည်ယခုလနှောင်းပိုင်းတွင် Warner Bros နှင့် LEGO မှခေါင်းစဉ်သစ်များကိုပြသလိမ့်မည် Star Wars: Skywalker
24 / 02 / 2021 24 / 02 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 1269 Views စာ0မှတ်ချက် Disney, Lego, Lego မှ marvel, Lego Spider-Man, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Movie,, ပတေရုသက Parker, Sony က, Spider-Man, Spider-man Homecoming, Spider-Man: ဝေးမူလစာမျက်နှာ မှစ., Spider-Manဖြေ - အိမ်မှာမရှိဘူး
Will PlayStation ၏အခြေအနေတွင် LEGO ပါဝင်သည် Star Wars: အဆိုပါ Skywalker Saga?
24 / 02 / 2021 24 / 02 / 2021 ခရစ် Wharfe 704 Views စာ0မှတ်ချက် Lego, Lego Star Wars: Skywalker Saga, Nintendo, Play Station က 5, PS5, Sony က, Star Wars, Play ကိုပြည်နယ်, TT အားကစားပြိုင်ပွဲ, Warner Bros.
Sony က State of Play အစီအစဉ်ကိုမနက်ဖြန်မှာပွဲထုတ်မယ်လို့ကြေငြာလိုက်ပါတယ်